Ny fiakaran'ny vidim-piainana mahery vaika amin'ny seranam-piaramanidina dia hanakana ny fanarenana ny rivotra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny fiakaran'ny vidim-piainana mahery vaika amin'ny seranam-piaramanidina dia hanakana ny fanarenana ny rivotra
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Mampidi-doza ny vidin'ny fotodrafitrasa amin'ny fampitomboana $ 2.3 miliara mandritra ny krizy, hoy ny IATA.
Manimba ny fifandraisana iraisam-pirenena ny fiakarana takiana amin'ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina sy serivisy serivisy (ANSP).
Ny fiakaran'ny seranam-piaramanidina efa voamarina sy ny fiakaran'ny ANSP dia efa nahatratra $ 2.3 miliara.
Miaraka, ny ANSP an'ny fanjakana 29 Eurocontrol dia mitady hamerina $ 9.3 miliara (€ 8 miliara) avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mba handrakofana ny vola tsy tratra tamin'ny 2020/2021.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) nampitandrina fa ny fampiakarana ny fiampangana nomen'ny seranam-piaramanidina sy ny serivisy serivisy fitaterana an-habakabaka (ANSP) dia hanakana ny fahasitranana amin'ny dia an-habakabaka ary hanimba ny fifandraisana iraisam-pirenena.
Ny fiakaran'ny seranam-piaramanidina efa voamarina sy ny fiakaran'ny ANSP dia efa nahatratra $ 2.3 miliara. Ny fiakarana bebe kokoa dia mety ho avo folo heny raha misy tolo-kevitra efa napetraky ny seranam-piaramanidina sy ny ANSP.
“Mampitombo ny fisondrotan-ketra $ 2.3 miliara mandritra io krizy io. Isika rehetra dia te-hametraka aorian'ny COVID-19. Saingy ny fametrahana ny vesatra ara-bola amin'ny krizy apokaliptika eo an-damosin'ny mpanjifanao, fotsiny satria azonao atao, dia paikady ara-barotra izay monopole irery ihany no afaka manonofy. Farafahakeliny farafahakeliny, ny fihenan'ny vidiny fa tsy ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tokony ho lohalaharana amin'ny fandaharam-pianarana isaky ny seranam-piaramanidina sy ANSP. Natao ho an'ny kaompaniam-pitondran-tenan'izy ireo izany, ”hoy izy Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Tranga iray hita ao amin'ireo mpanome tolotra fiaramanidina eropeana. Miaraka, ny ANSP an'ny fanjakana 29 Eurocontrol, ny ankamaroany dia fananan'ny fanjakana, dia mitady hamerina $ 9.3 miliara (€ 8 miliara) avy amin'ny kaompaniam-pitaterana vola handrakofana ny vola tsy tonga tamin'ny taona 2020/2021. ary ny tombony azony raha tsy afaka nanidina ireo kaompaniam-pitaterana nandritra ny areti-mandringana. Ankoatr'izay, tian'izy ireo atao izany ankoatry ny fiakarana 40% kasaina ho an'ny 2022 fotsiny.
Ohatra hafa koa ny:
Ny seranam-piaramanidina Heathrow manosika hampiakatra ny fiampangana maherin'ny 90% amin'ny 2022.
Seranam-piaramanidina Amsterdam Schiphol mangataka ny hampiakatra fiampangana maherin'ny 40% mandritra ny telo taona.
Orinasa seranam-piaramanidina Afrika Atsimo (ACSA) mangataka hampiakarana fiampangana 38% amin'ny 2022.
NavCanada mitombo ny fiampangana 30% mandritra ny dimy taona.
ANSP Etiopiana nampiakatra 35% ny fiampangana tamin'ny 2021